မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား | အိမ့်မှူးသော်
Snow May 11:17 PM
ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ. အရင်က ဖတ်ဖူးပေမယ့်. အခုပြန်ဖတ်တော့လည်း စိတ်ခွန်အားတွေ ပိုရှိလာဆဲပါပဲ.။ ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ အဲဒီလိုစိတ်ဓါတ်ခွန်အားဖြည့်ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဆရာ့ရဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ပုံစံကို အ၇မ်းအားကျတယ်.။ ဘာသာပြန်တာနဲ့မတူပဲ.အားလုံးကို နားလည်အောင် ဖတ်ရတာချောနေအောင် ပြန်ထားတာကလည်း ဆရာရဲ့ တကယ့်အရည်အချင်းကောင်းတစ်ခုပါ.
ချစ်စံအိမ် 12:56 AM